တက္ကစီများ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာနံပါတ်သို့ ပြောင်းမည် ~ Myanmar Express
တက္ကစီများ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာနံပါတ်သို့ ပြောင်းမည်
From : ခေတ်လူငယ်နိုင်ငံခြားသားများအတွက် အဆင်ပြေစေရန် အငှားယာဉ် (Taxi)များ၏ မြန်မာအက္ခရာ နံပါတ်များအား အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ နံပါတ်အဖြစ် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း တစ်လျှောက် အငှားယာဉ် Taxi အဖြစ်သာ အသုံးပြုရန်အတွက် တင်သွင်းလာပြီး မှတ်ပုံတင်ခ လျှော့ပေါ့ ကောက်ခံသည့် ယာဉ်များအား သာမန်ယာဉ်များနှင့် ရောထွေးမှု မရှိစေရန်၊ နိုင်ငံခြားသားများအတွက် အဆင်ပြေစေရန်နှင့် ပြောင်းလဲမှုများ မပြုလုပ်စေရန်အတွက် သီးခြားယာဉ်အမှတ်အဖြစ် အင်္ဂလိပ်စာလုံး၊ ဂဏန်းဖြင့် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရထားပို့ ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။ “နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက် ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော့် အမြင်တော့ မြန်မာရော အင်္ဂလိပ်ပါ နှစ်မျိုးစလုံး ပါသင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ တချို့မြန်မာတွေ အင်္ဂလိပ်လို မဖတ်တက်ပါဘူး” ဟု ဝါးခယ်မထရေးဒင်းကုမ္ပဏီမှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာစိုးထွန်းက ပြောသည်။ ယင်းသို့ သီးခြားယာဉ်အမှတ် သတ်မှတ်ရာတွင် အောက်ခံအနီရောင်တွင် အင်္ဂလိပ်စာလုံး၊ ဂဏန်းအား အဖြူရောင်ဖြင့် AA-1001 မှ 9999 အထိ သီးခြား သတ်မှတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး AA ကုန်ဆုံးပါက BB, CC ဖြင့် ဆက်လက် သတ်မှတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံခြားသားများအတွက် အမှန်တကယ် အဆင်ပြေမှု ရှိစေလိုလျှင် Taxi များအား အဆင့်မြှင့်တင်ပေးရန်လိုအပ်ပြီး အဆင့်မြှင့်တင်ရမည့် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေသင့်ကြောင်း ဒေါက်တာစိုးထွန်းက သုံးသပ်သည်။ “ကိုယ့်နိုင်ငံက Taxi တွေက မိုးယိုတာနဲ့၊ လေတိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်မြန်မာအချင်းချင်း စီးဖို့တောင် သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ နံပါတ်ပြောင်းရုံနဲ့တော့ ထူးခြားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို ဖြစ်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး” ဟု ယင်းက ဆက်ပြောသည်။ ယင်းသို့ Taxi များအား သီးခြား သတ်မှတ်ရန် ထုတ်ပြန်ချက်ကို ဇွန် ၁၅ ရက်တွင် အဆိုပါ ဌာနမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့ထုတ် Flower News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။Myanmar Express
ပြည်သူချစ်သော ဦးခင်ညွန့် ကော်ဖီဆိုင် ဖွင့်
မြန်မာနိုင်ငံ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပျက်သုန်းစေရန် ကြိုးပမ်းမှု၏ နောက်ကွယ်
မနှစ်က သင်္ကြန်တွင် သင်ဇာဝင့်ကျော် နာမည်ပျက်ထွက်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ်သင်္ကြန်တွင် ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် နာမည်ပျက် ထွက်ခဲ့
ကျော်ဇေယျာဝင်း ဟက်ထရစ် ဂိုးနှင့်အတူ မြန်မာတို့ ဂို...
စကာင်္ပူနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရာြး...
မြန်မာစကား ပြောတတ်ပြီး ပုဆိုးဝတ်ထားယုံနဲ. နိုင်ငံသ...
တကယ်တော့ မြန်မာဆိုတဲ့အမည်ကသာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစ...
ရခိုင်နှင့် အစိုးရတပ်ဖွဲ့ သတ်ဖြတ်၍ ရိုဟင်ဂျာ ၆၅၀ေ...
CDMA 450 /GSM မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများအား လက်ရှိ Post ...
ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှ ဂိုဒေါင် ၃၀ ခန့် မြို့ပြင်သို့...
အိန္ဒိယဘဏ် လာရောက်ဖွင့်လှစ်ဖို့ စီစဉ်နေ
မျိုးချစ်စိတ်၊ နိုင်ငံချစ်စိတ် ရှိသူတိုင်း မနက်ဖြန...
ပြည်ပမှာ အနေ၊ အစာချောင်နေတဲ့ ဒုက္ခသည် ကျွန်ကူလီများ...
မြန်မာအမျိုးသမီးများအတွက် စဉ်းစားရမယ့် အချိန်
မောင်တောတွင် လက်နက်လုယက်မှု ဖြစ်ပွါး
နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်း တစ်ဒေါ်လာ ကျပ် ၉၀၀ ဝန်းကျင်အထ...
ပြည်တွင်း၊ ပုဂ္ဂလိက အမြန်ချောပို့ လုပ်ငန်းအား နှစ်အ...
ရခိုင်သမိုင်းသုတေသီဆရာတော်၏ ရခိုင်ဒေသယနေ့ ၊ရှေ့ အလ...
Google ၏ အင်တာနက် မျက်မှန် လာတော့မည်
အမျိုးသမီးများနေ့တွင် အမျိုးသမီးများ ကားအလကား စီးရ...
ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ သယံဇာတဈေးကွက်ကြီး တစ်ခုကို ရန်ကုန်မြိ...
မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကို လက်တွေ့ကျကျ ကူညီသူ ဦးအောင်မင်...
တပ်မတော်က မူဆလင်ဘာသာဝင်တွေကို ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်
ရခိုင်ပြည်နယ် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ရန်ပုံငွေ ဘောလုံး...
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပဋိပက္ခကြောင့် သေဆုံးသူ ၆၉ ဦးရှိ...
အမေစုကို ထောက်ခံသူဒါရိုက်တာဝိုင်းကို စင်္ကာပူနိုင်ငံ...
စစ်တွေဈေးကြီး မွတ်ဆလင် ဆိုင်များမှ ပစ္စည်းများကို ...
မြန်မာဘက်ကို ပို့မယ့် လက်နက်မျိုးစုံ ထိုင်းရဲဖမ်းမ...
မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မျာ...
လာမည့်လွှတ်တော်၌ တိုင်းရင်းသားအရေး ဆွေးနွေးမည်
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက်များ ရေ...
ရခိုင်ဒေသရှိ ဒုက္ဓသည်များသို့ ကျပ်သိန်း ၁၁၀ ကျော် လ...
မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲသူများကို ရေဒီယိုသတ္တိကြွ လှိုင...
အောင်ဘာလေ သိန်းဆု ဌာနခွဲ ထီဆိုင်များမှ မူရင်းဈေး ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင်တေးဂီတဖြင့် ကုသခြင်းကို ဆောင်ရွက်...
လမ်းသွား လမ်းလာ များနှင့် လမ်းဘေး ဈေးသည်များ အတွက...
ပက်ထရိုနက်စ် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်ရေး ကု...
ကိုကာကိုလာက မြန်မာအမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်အတွက် ...
ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်နှင့် ဦးအောင်မင်း တွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လူမှုရေးကာကွယ်စောင့်ရှေ...
အားလုံး သတိရှိဖို့ လိုအပ်လာပြီ
﻿တစ်နေ့လျှင် နှစ်ရာကျပ်ဖြင့် ဖုန်းများတွင် G-mailက...
စစ်တွေမြို့ခံ များ ညမထွက်ရ အမိန့် ရုပ်သိမ်းလျှင် ဆ...
ရသေ့တောင် အကြမ်းဖက် သူများကို စစ်တွေသို့ လွှဲပြောင်...
သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာအေးကျော် ပြောတဲ့ ရိုဟင်ဂျာအေ...
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ သီဟသူရ...
မြန်မာ့ပေါင်းဆန်များကို ရုရှားနိုင်ငံသို့ ယခုလမှစ၍...
နိုင်ငံခုနှစ်နိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီများနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ...
လန်ဒန်မှာ ဘာပွဲလုပ်လုပ် မပါတော့.. ဟု ဇာဂနာ ပြောဆို...
ဗြိတိန်မှ car ဆားဗစ် စင်တာကြီး တစ်ခု မြန်မာနိုင်ငံ...
ဖို နှင့် မ ကိစ္စ။ Sex & Living Together ကိစ္စ။ Sing...
ပြည်သူတစ်ဦးချင်း၏ ဂျီဒီပီအား ငါးနှစ်အတွင်း သုံးဆတ...
အစိုးရပိုင် ရုံးအဆောက်အအုံဟောင်းများကို ဟိုတယ်အဖြစ...
Facebook မှ Comment နှင့် Post များကို ပြင်ဆင်ခွင်...
မျက်လုံးတော် ကျောက်စိမ်းနက်စစ်စစ်ဖြင့် တည်ထားသည့် ...
ဗီယက်နမ်အား အနိုင်ယူကာ နိုင်ပွဲ ဆက်နေဆဲ မြန်မာလူငယ...
ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်...
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦ...
လန်ဒန်မှာ ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ ပြဿနာတတ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေး နှ...
မြန်မာနည်းပြ ဗီယက်နမ်ပွဲ အတွက် နောက်တန်းကို စိတ်ပူ...
ဆရာကြီးလူထုစိန်ဝင်းဧ။် နောက်ဆုံးရေးသားခဲ့သော ဆောင်...
လိင် ဆက်ဆံ မှု ဦးစား ပေး ချစ်စခန်း ဖွင့် မှု ထွန်းကာ...
အချိုမှုန့် စားသုံးခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများ
အမှိုက်နဲ့ ကွမ်းတံတွေးကို ပစ်ချင်သလိုပစ် ထွေးချင်သလ...
၂၀၁၂ ခုနှစ် မကုန်မီ ကျပ်၂ သိန်းအောက် တန်ဖိုးနည်းဖု...
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း မီးလောင် ခံရသည့် ဒေသခံများ၏ေ...
ပထမကြိမ် နိုင်ငံခိုးဝင်မှုအား အရေးမယူ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ...
ရသေ့တောင်အကြမ်းဖက် လူသတ်မှု ဘင်္ဂါလီ ၅၀ကျော်ကို ဖမ်းဆ...
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ရုံး အဖွဲ့ဝင်များ ဝါရှင်တန် ဆွေးေ...
ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကို ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးလို ၀တ်ဆင်ခိုင...
လျှပ်တစ်ပြက် ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချူပ် အား ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)...
သမ္မတဦးသိန်းစိန် ပထမဆုံး ဥရောပခရီးစဉ်အဖြစ် ဗြိတိန်...
မြန်မာပြည်သိမ်းပိုက်ရေး အစ္စလာမ်မစ် အစွန်းရောက်များ...
တပ်မတော် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှ...
မနေ့ က သိသူများနဲ့ယခင်က မကြားဖူးသူများ ပြသနာ
အပစ်အခတ်ရပ်စဲနိုင်ရေး KIA နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို...
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ်အတွင်း ဆူပူအကြမ်းဖက...
လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေး မြန်မာအစိုးရ ကြိုးပမ်းမှု အ...
မိုးကျတော့မည် ... ၊ ကျောင်းဖွင့်တော့မည် ... ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် တစ်သိန်းဝန်းကျင်မှာ ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင်သာ ခိုလှုံနေရ
မေ ၁၉ ရက် ၂၀၁၃
မြန်မာနိုင်ငံ၏ မိုးဦးရာသီသည် လာမည့် ဇွန်လဆန်းတွင် စတင်မည်ဖြစ်ပြီး အခြေခံ ပညာကျောင်း များ လည်း စတင်ဖွင့်လှစ်တော့မည် ဖြစ်သော်လည်...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဓမ္မတာဆန့်ကျင် လိင်ဆက်ဆံမှုဥပဒေ ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆို
From : ..The Voice Weekly
ဓမ္မတာဆန့်ကျင် လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို တားမြစ်ထားသော ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၇ ကို လွှတ်တော် က ပယ်ဖျက်ပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့နယ် ၁၃ ...
“မြန်မာနိုင်ငံ အလံကို အလေးမပြုနိုင်ဘူးတဲ့”
၁၉-၅-၂၀၁၃-ရက်နေ့ (၁)နာရီမှာ ကျင်းပတဲ့ ပဋိပက္ခမဖြစ်ရေး ဘာသာပေါင်းစုံ အစည်းဝေးပွဲမှာ မူဆလင် အမျိုးသမီး တစ်ယောက်က ပြောတဲ့ စကားလေးက တော်တော်လေး မှတ်သားစရာကောင...
တူမကို လိင်ကျွန်လုပ်ခိုင်းရန် အမေရိကန်သို့ ခေါ်လာသည့်အဒေါ်ကိုဖမ်းမိ
[image: တူမကို လိင်ကျွန်လုပ်ခိုင်းရန် အမေရိကန်သို့ ခေါ်လာသည့်အဒေါ်ကိုဖမ်းမိ Sunday, May 19, 2013 တူမဖြစ်သူကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ခေါ်လာပြီး ယောက်ျားဖြစ...
တရုတ်အစိုးရ၏ ကျောထောက် နောက်ခံဖြင့် စစ်လက်နက်မျိုးစုံ နှင့် သံချပ်ကာ ကား ၊ အမြောက် လက်နက်မျိုးစုံတို့ကို တရုတ် ပြည်မှ မှာယူတင်သွင်းနေသည့် UWSA ခေါ် ၀တပ်ဖွဲ ...
မြန်မာသမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်အား လူ ၃၀၀ ခန့် လာရောက် တွေ့ဆုံ ခဲ့ပြီး လူ ၇ ယောက်တိတိ လာရောက် ဆန္ဒပြ ၊ အမေရိကန်သမိုင်းတွင် အသေးဆုံး ဆန္ဒပြပွဲ ဖြစ်ခဲ့
မြန်မာသမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်အား အမေရိကန် နိုင်ငံရောက် မြန်မာလူမျိုးပေါင်း ၃၀၀ ခန့်မှ လာ ရောက် တွေ့ဆုံ ခဲ့ပြီး နှုတ်ဆက် ကာ သမ္မတကြီး၏ မိန့်ခွန်းကို လာရောက် န...
KIO လ၀က ကျောင်း လိုင်ဇာမြို့တွင် ပြန်ဖွင့်
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ၏ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းဌာနများ အတွင်း ခန့်အပ်သွားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တစ်လကျော် လူဝင်မှုကြီး ကြပ်ရေးေ က...
တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်သွားခဲ့ပြီး ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာသော ဒေသခံများအား ကူညီ စောင့်ရှောက်ပေး
[image: တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်သွားခဲ့ပြီး ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာသော ဒေသခံများအား ကူညီ စောင့်ရှောက်ပေး]
နေပြည်တော် မေ ၁၈ နယ်မြေတည်ငြိမ် အေးခ...
ခရစ်ဘရောင်းနှင့် T-ara N4 အဖွဲ့ ဂီတလုပ်ငန်းများ လက်တွဲ လုပ်ဆောင်
[image: ခရစ်ဘရောင်းနှင့် T-ara N4 အဖွဲ့ ဂီတလုပ်ငန်းများ လက်တွဲ လုပ်ဆောင်] လော့စ်အိန်ဂျလိစ် မေ ၁၈
ကမ္ဘာကျော် ပေါ့ပ်အဆိုတော် ခရစ်ဘရောင်းသည် T-ara ...
ပဉ္စ ရတျာ သုဂန္ဓဗ္ဗာ၊
သတ္တ ရတျာ ဓနုဂ္ဂဟာ။
အဍ္ဎမာသံ သိဿာ မလာ။
တတ်လှစွာသော စောင်းသမားသည် ငါးရက်တာမျှ စောင်းနှင့် ကင်းကွာလျှင် ပျက်စီးသွား၏။
ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထင်ရှားနေသော ဘာသာရေးတရားများ အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း
၁။ “ဟိန္ဒူ ဘာသာ ”
တည်ထောင်သူ == ? ။
စတင်ပေါ်ပေါက်ချိန် == ခရစ်မပေါ်မီ နှစ် ၁၅၀၀ ခန့် ။
စတင်ပေါ်ပေါက်ရာ ဌာန == အိန္ဒိယပြည် ။
ဘာသာ၏ အထွက်အထိပ် ပုဂ္ဂိုလ...
ခေါင်းဆောင်ကြီးများက ပျော်ပါးစားသောက် ချမ်းသာပြီး ငယ်သားများက ဆင်းရဲသဖြင့် တပ်မတော် ခေါင်း ဆောင် များကို ပုတ်ခတ်ကြသတဲ့။ ဒါဖြင့် ဘယ်ခေါင်းဆောင်တွေက ဘာကြော...
အမေရယ် ၊ အဖွားရယ် ရလို့မှ မတင်းတိမ် မြေးကိုပါ ကြံပြီး သတ်တဲ့သူ